PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-09-30 - BABAMBE UMOYA NGOWE-IDOLS
BABAMBE UMOYA NGOWE-IDOLS
ABASABULALI ubuthongo ngomafungwase wabo, abazali bentokazi esohlwini lwabangu-9 kuma-idols abazobe bencintisana namhlanje, okulindeleke ukuba oyedwa wabo adliwe yizembe.
Umnu Wanda Memela nenkosikazi yakhe, umbali, basepinetown ethekwini, abangabazali bakazama (Xae) Memela (19), bathi ukudla nobuthongo akusehli kalula, babambe umoya ngendodakazi yabo abafisa ukuba idlulele phambili kulo mncintiswano.
Bakhulekela ukuba idlulele phambili namhlanje. Uxae bekungokokuqala engenele lo mncintiswano. Uyise uthi ngesikhathi indodakazi yakhe imazisa ukuthi ifuna ukuyongenela lo mncintiswano, akakunambithisisanga lokho, kodwa uthi ngemuva kokubona ithalente layo kumabonakude, yilapho eqale khona ukuyeseka kakhulu.
“Yize ubecula phambili esikoleni nasesontweni, kodwa ngesikhathi engitshela ngale nto, angizange ngizitshele ukuthi ingane yami isingahlula izinkumbi zabantu. Njengoba sebebancane kanjena abasele, uyafana nosenqobile kithina,” kusho uyise.
Uthi sekuphele izinyanga ezimbili indodakazi yabo ingekho ekhaya imatasa nama-idols. Lokho uthi kubenza babe nesizungu esikhulu njengoba uma uxae ekhona ubavusa ngomzwilili, ikakhulukazi uma egeza bathi uhlale ecula.
Bathi sekuguge iphakethe njengoba kubaphoqa ukuthi ngazo zonke izimpelasonto babe segoli ukuyokweseka indodakazi yabo.
“Asikaze siphuthe nakanye uma mina ngimatasa, unina uyahamba namanye amalungu omndeni beyomeseka,” kusho uyise.
Uthi into emthokozisa kakhulu wukuthi indodakazi yabo igcwele ukuzethemba okukhulu.
“Kade ngikhuluma naye nje ocingweni izolo (Lwesithathu) ngemuva kokuzilungiselela kwabo. Ungitshele ukuthi iculo abamnikeze lona kulokhu akangabazi ukuthi uzoshiya abantu becela impinda,” kulanda umnu Memela. Uxae uyindodakazi yokuqala yakwaMemela, futhi ukhonza ehis Church, khona epinetown. Ufunde epinetown Girls High, uqede umatikuletsheni ngonyaka owedlule. Ukumvotela uthumela I-SMS ku-37400 bese
UZAMA (Xae) Nzama okwi-top 9 kowama-idols SA.